Somaliland: Wasiirka Warfaafinta oo Qodobbeeyay Gabood fallo BBC-du ku Hayso Somaliland - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiirka Warfaafinta oo Qodobbeeyay Gabood fallo BBC-du ku Hayso Somaliland
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland, ahna Afhayeenka Xukuumadda, Md. Cismaan Cabdilaahi Saxardiid (Caddaani), ayaa shaaca ka qaaday in laanta afsoomaaliga ee BBC-du ay ka baydhay wararkii xaqiiqada ku dhisnaa ee lagu yaqaanay.
• Doodaha siyaasiga ah ee BBC-du, waa kuwa ka fog xaqsoor, waayo mar kastoo ay qabanayaan dood waxa ay makarafoonka soo fadhiisiyaan 3 qof oo Soomaaliya ah & qof Somaliland taasi oo aan ahayn wax isku dheelitiran.
• Waxa ay taa waliba ku sii ladhaan dad ay sii diyaariyeen oo kala soo xidhiidha baraha bulshadda, kuwaas oo iyana aragtidoodu dhan ka tahay qadiyadda Jamhuuriyadda Somaliland.
• BBC-du waxa Jamhuuriyadda Somaliland marar badan ka dhigtaa mid ka tirsan gobollada loogu yeedho federaalka Soomaaliya, tusaale ahaan 3dii Feburary 2017 doodii lagaga hadlayey khilaafaadka dhinaca badda ee Kenya & Soomaaliya ayey xataa ku lifaaqeen xuduudaha bada Jamhuuriyadda Somaliland, ee bal xageebay iska soo galaan.
• Waxa kale oo ay muran iyo doc ka wareen ku sameeyaan wariyeyaasha daadihinaya dooduhu mar kasta oo ay hadalka siiyaan hal-ka qof ee Somaliland, isaga oo aan wax ka taaban amba gaadhin qodobkii doodiisa.
• Waxa kale, oo intaa u sii dheer in ay qayb ka siiyaan doodahaasi siyaasiyiin la shaqeeya ama loo tiriyo inay taabacsan yihiin xukuumadda Soomaaliya, kuwaas oo ay ugu yeedhaan aqoonyahanno dhexdhexaad ka ah arrimaha Soomaaliya & Somaliland balse, aan ahayn ee ku caan baxay nacaybka & lidka ay ku yihiin Jamhuuriyadda Somaliland.
• Sidoo kale ka qaybgalka doodaha siyaasiyga ee xidhiidhka baraha bulshada waxay ku martigeliyaan inta aragtidoodu ka dhanka tahay Somaliland.
• Iyadoo ay marka horeba si ka baxsan dhexdhexaadnimada ay u soo dhex dhigaan doodo hal dhinac ka raran ayey haddana waqti ka badan ka halka qof ee Jamhuuriyadda Somaliland siiyaan mid kastoo ka mid ah saddexda kale ee Soomaaliya.
• Runtii waxa kugu adkaanaya inaad kala saarto warbaahinta Muqdisho iyo BBC-da oo aad moodo mid laga wada maamulo Xamar.
• Dhammaan waxyaabahaa aan soo xusay, hore ayaanu ugu gudbinay madaxda sare ee BBC-da qeybta Afrika iyo ta laanta Afka Soomaaligaba, nasiib darrose, wax jawaaba kama hayno.
• Hadda, qoraal kale ayaanu u dirnaynaa BBC-da, waxayse noqonaysaa in wixii intaa ka dambeeya ay nagu waajib tahay in aanu ku xisaabtano sidii aan u difaaci lahaynb jiritaanka qaranimada Jamhuuriyadda Somaliland. Waxa kale, oo aan dib u eegi doonaa heshiiskii aan wada galnay BBC-da ee dhinaca baahinta.